Maqaal: Aragtida daawadayaasha Hindiga ah iyo filimka Kesari qiimeynta uu helay – Filimside.net
Maqaal: Aragtida daawadayaasha Hindiga ah iyo filimka Kesari qiimeynta uu helay
Superstar Akshay Kumar wuxuu la midoobay filim sameeyaha caanka ah Karan Johar shirkadiisa Dharma Productions waxayna la imaadeen filimka weyn Kesari oo tiyaatarada la saaray Khamiistii aan kasoo gudubnay (21 Mar 2019) waana filim fariin wadaninimo oo taariikhi ah xambaarsan.
Jilaayaasha filimkan: Aksay Kumar, Parineeti Chopra iyo kuwo kale.
Haddaba filimka Kesari kuwa filimada ka faaloodaan ama falanqeeyaan siweyn ayay usoo dhaweeyeen waxayna ku tilmaameen mid ka mid ah aflaanta ugu tayada wanaagsan Bollywood-ka dhawaanahan sameeyaan sidoo kalena inta badan shanta xidig filimada lagu qiimeeyo afar xidig oo ka mid ah ayaa filimkan la siiyay waana arin ka caawin doonto inuu ganacsi weyn sameeyo mustaqbalka dhow iyo midka fog.
Haddaba barnaajkeenii xiisaha lahaa kaasi oo ku saleesan aragtida daawadayaasha ama dadka tikit-ka u goostaan filimada inay qiimeyn ku sameeyaan Jimco kasto daawadaan ayaan sii amba qaadeynaa.
Barnaamijkan waxaa asal ahaan iska leh shabakada Adda Today oo isku hawshan inay gobolada ugu waa weyn Hindiya tagto sidoo kalena wareesato daawadayaasha tiyaatar-ka tikit u goostaan si aragtidooda u aruuriyaan.
Aragtida daawadayaasha waxaa loo yaqaan Word of Mouth ama hadal heynta dadka hadal heyntaas waxay noqon karaa mid wanaag ama xumaan ah.
Haddii daawadayaasha maalinta kowaad filimka daawadaan aragtidooda la aruuriyay u badato mid wanaag ah waxay sababeysaa dad badan oo marka hore ka baaqsadeen daawadayaasha inay usoo daawasho tagaan maal maha xiga.
Si la mid ah haddii daawadayaasha aragtidooda xumaan noqoto oo ay filimka sheekadiisa dhaliilaan waxay sababeysaa in mashruucaas dad badan usoo daawasho tagin meeshana ku fashilmo.
Aragtida Daawadayaasha Maxaa Lagu Cabiraa: Shabakada Adda Today waxay ku cabirtaa hal beeg 1 ilaa 10 u dhaxeeyso taasi oo lagu qiimeeyo hadba dadka sida ay filimka kaga helaan.
Filimka qiimeyntiisa haddii ay u badato 5-dhibcood ka hoose waxay ka dhigan tahay inuu yahay mashruuc daawadayaasha siweyn u diideen.
Filimka qiimeyntiisa haddii 8 dhibcood gaarto iyo ka sare waa filim daawadayaasha ka wada heleen oo ay siweyn u jeclaadeen.
Aragtidaan ama qiimeyntaan qayb kama ahan dadka filimada falanqeeyaan kaliya waxaa aragtidaan ka qayb qaataan ama filimada wax laga weydiiyaa dadka tiyaatarada tikit-ka u goosteen si xogtaan aysan dhinac ugu jan jeersan waayo filim falanqeeyayaasha haddii aragtidaan qayb laga dhigo waxaa macquul ah inay dhinac u bataan laakiin qofka caadiga ah aragtidiisa meelna uma badaneyso wuxuu ku saleynaa waxa uu daawaday inuu ka helay ama uusan ka helin.
Filimka Kesari Dadkii Daawadeen Iyo Qiimeynta Ay Siiyeen:
Gobolo kala duwan magaalooyinka waa weyn ee ku yaalo ayay Adda Today booqatay tiyaataradooda waxayna wareesatay dadkii daawadeen filimka Kesari sida ay u arkaan.
Kesari dadkii daawadeen ee tikit u goosteen kuna nool gobolo kala duwan aragtidooda qiimeyn ahaan marka la aruuriyay wuxuu helay filimkaan 8-dhibcood.
Sidaa darteed Kesari kuwii daawadeen dhamaantooda waxay isku raaceen inuu yahay filim fariintiisa aad u wanaagsan tahay sidoo kalena mudan yahay in qoysaska tiyaatarada aadaan si ay filimkan fariintiisa wadaninimo ee taariikhiga ah u daawadaan.
Taasina waxay ka caawin doontaa filimka Kesari inuu ganacsi aad u badan sameeyo Khamiis ilaa Axad sidoo kalena cimri ahaantiisa ganacsi wacan sameeyo oo u tiyaatarada mudo baaqi kusii ahaado marba haddii fariintiisa aad looga wada helay.
Aragtida Daawadayaasha Iyo Qiimeynta Ay Ka Heleen Filimka Sanadkaan 2019 La Daawaday Sida Ay Waqti Ahaan Usoo Kala Horeeyeen Tiyaatarada Loo Saaray:
1. Uri – The Surgical Strike 8-dhibcood (8.2-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha saxda ah)
2. The Accidental Prime Minister 7-dhibcood (7.0-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
3. Why Cheat India 7-dhibcood (6.5-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
4. Manikarnika 8-dhibcood (7.7-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
5. Thackeray 7-dhibcood (6.8-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
6. Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga 6-dhibcood (6.1-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
7. Gully Boy 8-dhibcood (8-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
8. Total Dhamaal 7-dhibcood (7.2-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
9. Luka Chuppi 7-dhibcood (7.3-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
10. Sonchiriya 6-dhibcood (6.6-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
11. Captain Marvel 8-dhibcood (7.6-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
12. Badla 8-dhibcood (7.8-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
13. Kesari 8-dhibcood (8-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
Waa Kuwee Filimada Ugu Qiimeynta Wanaagsan Ee Daawadayaasha Ka Heleen: Filimka dhibco 8-dhibcood gaarayo helo ama ka badan helo ayaa ka mid noqon karo kuwa ugu sheekada wanaagsan ee daawadayaasha gobolada kala duwan ka heleen.
Uri ayaa ahaa filimka ugu fariinta wanaagsan dhamaan aflaanta 2019 daawadayaasha tikit u goosteen sanadkan 2019 mana soo bixin filim Uri ka sheeko wanaagsan aflaanta waa weyn ee 2019 dawadayaal badan u daawasho tageen.
Fadlan hoos kaga bogo filimada sida gaar ah aan usoo xulnay ee ah kuwa sanadkaan soo dhaweynta ugu wanaagsan ka heleen daawadayaasha tikit-ka tiyaatarka u goostaan:
2. Gully Boy 8-dhibcood (8.0-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha saxda ah)
3. Kesari 8-dhibcood (8-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
4. Manikarnika 8-dhibcood (7.8-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
5. Badla Badla 8-dhibcood (7.8-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
6. Captain Marvel 8-dhibcood (7.6-dhibcood aragtida qiimeynta daawadayaasha)
Gunaanad: Farqi ayaa u dhaxeeyo ka helista filimka daawadayaashiisa iyo ganacsiga uu sameyn karo inuu Flop noqdo ama Hit noqdo.
Tusaale ahaan filim sheekadiisa aan 8-dhibcood qiimeyn gaarin ayaa ganacsi weyn sameyn karo asigoo 6.5 ama 7-dhibcood heesto waxaana ugu wacan haddii filimka filim weyn yahay sidoo kalena mada daalo dhameestiran leeyahay wuu ka ganacsi badnaan karaa filim qiimeyntiisa 8-dhibcood tahay laakiin fariintiisa xadidan tahay filim weyna aan ahayn ama jilaayaal awood badan wadin.
Sidaa darteed filim walbo dadka loogu tala galay haddii ay soo dhaweeyaan wuu gadmi karaa laakiin filim fariintiisa Hindiya dhan loogu tala galay haddii uu soo dhaweyn daawadayaasha ka helo cid celin karto malahan.
Mahad Sanidiin Saaxiibayaal.